ShweMinThar: -Sexually active ပြန်ဖြစ်အောင် Gym ဆော့ခြင်းက ကူညီနိုင်ပါသလား ???-
-Sexually active ပြန်ဖြစ်အောင် Gym ဆော့ခြင်းက ကူညီနိုင်ပါသလား ???-
ဒီမေးခွန်းလေးတွေရဲ့ အဖြေ၊ လိင်ဆက်ဆံလိုစိတ်ပြန်လည် ပြင်းထန်လာအောင် လုပ်နိုင်မလဲရဲ့ အဖြေကို ထုံးစံအတိုင်း Golden_Dreams page နဲ့ အတူကြည့်လိုက်ရအောင်။
တရားထိုင်ခြင်း၊ အကြောလျှော့ခြင်းတွေတင်သာမက လောကကို အကောင်းမြင် ရှုထောင့်ကနေ ကြည့်ခြင်းဟာလဲ မရှိမဖြစ်ပါပဲ။
သင်ဟာ ငယ်ရွယ်စဉ်ဟာ ကြီးထွားဟော်မုန်းတွေ မြင့်တဲ့အရွယ်မလို့ Testosterone နည်းတဲ့ ပြသနာကို ဆယ်ကျော်သက်မှာ ကြုံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့်လဲ ငယ်တုန်းဆော့သူတွေ အတက်မြန်တာပေ့ါ။
ကဲ၊ လိုအပ်မယ့်သူတွေအတွက် အကျိုးများမယ် ယူဆလို့ Admin တော့ အရှည်ကြီး ရေးပြီးပါပြီ။ ကြိုက်နှစ်သက်ရင် ပြန်လည်ဝေမျှနိုင်ပါတယ်။ အသိမိတ်ဆွေတွေလဲ အကျိုးရှိမှာ မြေကြီး လက်ခတ်မလွဲဘူး မဟုတ်လား။ 😊
မူရင်းရေးသားတင်ဆက်သည့် စာမျက်နှာ - Golden _ Dreams ❤️
Posted by Alex Aung at 3:26 AM